ukubaza – The Ulwazi Programme
Ukubaza lokhu kubaluleke kakhulu njengoba iningi lezinto esizisebenzisayo zakhiwe ngogodo emakhaya, okubalwa kukho izinkamba, izinqoko, izinkezo kanye nezigqiki nezibhuku njengoba sikuvezile ekhasini lokuqala lokubaza. Kuleli khasi siqhubeka la sigcine khona sihlanganisa ixhama. Izinkezo, Izingxwembe namaPhini. Lezi yizinto zasexhibeni, ezisetshenziswa uma kuphekwa, okubalwa ukugovuza ibhodwe noma ke ukumaya uma sekuqedwe ukupheka. Ukubaza lokhu kwenziwa ngisho abakhapheyana … Read more
Izigqiki Nezigubhuku Isigqiki esokuhlala, isibhuku esokuqamela. Isigqiki lesi sakhiwa sibe namasondo okuma, lama sondo aba unxantathu ukuze sizimelele kahle, kanti ke isibhuku sona simise okwesiqamelo sesilungu. Imithi ebisetshenziswa ukwakha isigqiki nesibhuku kuba umgxamu, nomnyamathi. Kanti ke neminye imithi esetshenziswa ukubasa ezinye izinto emihle kuba umkhoba kanye nothathawe, umqalothi, isinene, umasethole kanye nebunda ukubala nje engatheni … Read more